१३ बर्षीय छात्र र ३४ बर्षीय शिक्षिकाको अनौठो प्रेम कहानी ( पढ्नुहोस ) « गोर्खाली खबर डटकम
अब ट्रायल पास गर्नेलाई यातायात विभागले दुई थरीका लाइसेन्स उपलब्ध गराउने
अबको तीन दिन देशैभर पानी पर्ने
४१ जिल्लामा बाढीको जोखिम, बजाइयो खतराको ‘साइरन’
विश्वकै ठूलो परिवारका अभिभावकको मृत्यु
महाकालीमा भारतको तारन्तार बलमिच्याइँ, सरकार पत्राचारमै सीमित
महको सेवन गर्ने गर्नु भएको छ भने एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला,यस्तो बन्दै छ मह सेवन गर्नेहरुको शरीर
१३ बर्षीय छात्र र ३४ बर्षीय शिक्षिकाको अनौठो प्रेम कहानी ( पढ्नुहोस )
तपाईलाई सुन्दा पनि अचम्मै लाग्न सक्छ , एक विधालयको विधार्थी र शिक्षिका प्रेममा पर्छन् र १३ बर्षका बालकले ३४ बर्षकि शिक्षिकालाई गर्भवती बनाउँछन् । तर यो घटना सत्य हो । यो घटना सन् १९९६ मा अमेरिकामा भएको हो । त्यस समय अमेरिकामा एकजना शिक्षिका निकै चर्चामा थिइन् । ३४ वर्षकी ती महिलाको नाम मेरी हो । उनी एक विद्यालयमा पढाउँथिन्
उनले पढाउने स्कुलमा एकजना १३ वर्षीय छात्रले पढ्थे । उनको नाम विली हो । मेरी र विलीबीच यतिधेरै सामिप्यता कायम भयो कि उनीहरु एकअर्काको प्रेममा परे । उनीहरुबीच यौ न स’म्पर्क पनि भएछ । झण्डै एक वर्षसम्मको शा’रीरिक स’म्पर्कमा रहेका उनीहरुका विषयमा गाइँगुइँ चल्न थाल्यो । उनीहरुको स’म्बन्ध अ वैध थियो ।
त्यसैले ना’बालिग सँग अवै’ध स’म्बन्ध कायम गरेको आरोपमा मेरीलाई पुलिसले प’क्राउ गर्यो । उनलाई जेल सजायँ पनि भयो । तर जेलमा अनौठो घटना घ’ट्यो । उनले जेलभित्रै बच्चा जन्माइन् । वास्तवमा उनको पेटमा विलीसँगको यौ न स’म्पर्क बाट बच्चा जन्मिएको थियो । बच्चा जन्मिएपछि उनलाई जेलमुक्त गरियो निगरानीमा रहने गरी ।
तर जे’लमुक्त गर्ने बेलामा अदालतले उनलाई सख्त आदेश दिएको थियो, प्रेमी विलीसँग कहिल्यै पनि भेट गर्न नपाउने । तर जेलबाट निस्किने बित्तिकै विलीले अदालतको आदेशको खिल्ली उडाउन थालिन् । उनी एकपटक विलीसँग कारभित्र आ’पत्तिजनक अवस्थामा रहेको बेला प’क्राउ परिन् । त्यसपछि उनलाई सात वर्षको जेल सजाय भयो ।
रोचक कुरा त के भने त्यो बीचमा उनी फेरि ग’र्भवती भएकी थिइन् । उनले जेलमै दोश्रो बच्चा जन्माइन् । यसपटक भने उनलाई पूरै ७ वर्षको स’जाय काटेपछि मात्र जे’लमुक्त गरियो । सन् २००४ मा जेलमुक्त भएसँगै मेरी पुन विलीसँग स’म्बन्ध कायम गर्न थालिन् । जब विलीको उमेर २१ बर्षको भयो र कानूनी रुपमा विहेका लागि योग्य बने तब विली र मेरीबीच वैधानिक रुपमा बिहे भयो ।
त्यतिबेला मेरी चाहिँ ४२ वर्षकी थिइन् । बिहेअघि नै उनीहरुका दुईवटा बच्चा जन्मिसकेका थिए । मेरी जेलमा रहेको बेला विलीकी आमाले ती दुवै बच्चाको हेरचाह गरेकी थिइन् । बिहेपछि मेरीले थप दुई सन्तान जन्माइन् । अहिले मेरी र विली आफ्नो पूरै परिवार सहित वाशिंटनमा बस्दै आएका छन् । एक अन्तर्वार्ताका क्रममा विली र मेरीले आफ्नोजस्तै स्थितिमा नफस्न आफ्ना बच्चाहरुलाई सचेत गराएका थिए । लिस्ट खबर।
कस्तो अचम्म ! मान्छेकै मुखमा २ सय ३२ दाँत भेटिएपछी
आइसियुमा उपचार गरिदै ,शरिरभरि यस्तो ,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो )
शनि क्रोधित हुँदा घरमा आइपर्छ यस्तो आपत, तुरुन्तै अपनाउनुहोस यी उपाय!
गौमाताको दर्शन गरौ ।
कम्प्यूटर भन्दा पनि तेज चल्छ यी ४ राशिको दिमाग, तपाई पनि पर्नुभयो की ?
आफ्नै छोरा संजयलाई भन्न नसकेपछि जीवनभरी लुकाएर राखिन आमाले यो कुरा, मृत्यु अघि संजयको बुवालाई भनेर छोडीन् संसार
एलियनसँग सम्पर्क गरे, मानव जाति नै स’माप्त हुने वैज्ञानिकको चेतावनी
पेटको बोसो घटाउन अपनाउनुस् यी ९ घरेलु विधि, पाउनुहुनेछ गज्जबको नतीजा !
तीन दिनको मौसमले निम्त्याउँदै खतरा, महाशाखाले जारी गर्यो चेतावनी